परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईको पोष्टले नेपाली राजनीति तरङ्गित : Dr. Rajan Bhattarai
–बोलिराखेका छन् त । अब कसले भनेर मैले यही भनेर किन भन्नु पर्याे र ।
सरकारलाई त्यस्तो लागिसकेको रहेछ भने त जनतालाई त भन्नु पर्याे ।
भनेको त्यसले अन्ततगोत्वा राजतन्त्र फर्काउने शक्तिलाई नै सहयोग पुर्याउँछ भन्ने तपाईको बुझाइ ?
–प्रतिगामी शक्तिलाई नै सहयोग पुर्याउँछ । यतिबेला हामीले जनताले पाएका अधिकारहरु लामो संघर्षबाट प्राप्त संस्थागत गरिएका विषयहरुलाई उल्ट्याउन खोज्दा त्यसको सहयोग अन्ततोगत्वा प्रतिगामी शक्तिलाई हुन्छ । जुन कुरा हामीले विगतमा भोगेका छौं ।
अलिकति जनताले पनि बुझ्ने गरि भन्दिनु पर्यो ?
–तपाईको इन्टरप्रिटेशन हो । मैले लेखेको भाषाले त्यो कुरा दिदैन । मैले त्यहाँ प्रष्ट रुपमा भनेको छु, यो व्यवस्था उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरु । यो संविधानलाई उल्टाउन खोज्नेहरु जसलाई यो हिजो ल्याएको चित्त बुझेको छैन् भन्ने शक्तिलाई इंगित गर्न खोजिएको भन्ने बुझ्नु पर्याे ।
–यो चाहि तपाईंको अनौठो लाग्छ । तपाईंको आफ्नो खालको व्याख्या गर्ने होइन । मैले श्रृखंलावद्ध रुपमा भनेको छु सुरुमा मैले जे भनेको छु, त्यसैको निरन्तरताको रुपमा इतिहास मैले अघिनै भने २००७ सालमा हामीले आन्दोलन ग¥यौं, ०४६ सालमा आन्दोलन गर्यौं । पटक पटक हाम्रा आन्दोलनहरु खोसिए । पटक पटक हामीले संविधान ५/६ ओटा बनाउनु पर्यो यो मुलुकमा । त्यस कुरातर्फ इंगित गरेर मैले भनेको हुँ । त्यस तर्फ जानु हुदैन भन्ने हो मेरो भनाइ ।